सबै जुटेपछि फेरियो सामूदायिक विद्यालयको मुहार (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
सबै जुटेपछि फेरियो सामूदायिक विद्यालयको मुहार (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Apr 11, 2019
१. सात विद्यार्थीमा झरेको कास्कीको एक सामुदायिक विद्यालयले देखायो चमत्कार
कास्की । आँटे के हुन्नर ? असम्भव भन्ने विषय कामचोरहरुको शब्दकोषमा मात्र हुन्छ भन्ने सत्यतालाई कास्कीको एक सामुदायिक विद्यालयले चरितार्थ गरेर देखाएको छ । सामुदायिक विद्यालय भने पछि हेला गरेर हेर्ने र कमजोर शैक्षिक प्रणाली भएको विद्यालयमा लिने चलन नौलो होइन तर नेपालमा धेरै यस्ता सामुदायिक विद्यालय छन जस्ले निजी विद्यालयको तुलनामा गुणस्तरीय शिक्षा दिने मात्र नभइ अब्बल विद्यार्थीीहरु उत्पादन गर्दै आएको छ ।
यता कास्कीको पोखरामा रहेको एक सामुदायिक विद्यालयले पनि चमत्कार गरेर देखाएको छ । एक समय ७ जना विद्यार्थीमा सीमित विद्यालयले अहिले एक्कासि फड्को मारेर १ सय ८० विद्यार्थी भेला पार्न सफल भएको छ । उस्ले आफ्नो शिक्षण शैलीमा र व्यवस्थापनमा गरेको परिवर्तन आश्चर्यजनक सफलता हात पारेको छ । पोखराको शिलिङेमा रहेको शिवशक्ति आधारभूत विद्यालयले पाएको यो सफलताले त्यहाँ अध्ययनरत गरीब तथा निमुखा विद्यार्थीको भविष्य उज्यालो बन्ने संकेत देखिएको छ ।
२. नेपाल एकीकरण पूर्वको बागलुङ कालिका मन्दिरसंग जोडिएको त्यो अध्यामको कथा
बागलुङ । नेपालमा मनाइने चाडपर्वको आआफ्नै विशिष्ट परम्परा रहेको छ । त्यसमाथि पनि चाडपर्व र विशेष अवसरमा पुजिने देवीदेवताका मन्दिरहरुको महिमा पनि कम छैन । आश्चर्यलाग्ने किम्बदन्तीहरु जोडिने गरेको नेपालका मठ मन्दिरहरुमा बागलुङको प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिर पनि विशिष्ट स्थान छ ।
देशभरका धर्मभिरुहरु पुग्ने गरेको कालिका मन्दिरको कारण बागलुङमा मनाइने चैते दशैंले पनि अलग पहिचान बोक्न पुगेको छ । नेपाल एकीकरण हुन धेरै समय अघि स्थापित यो मन्दिरको महिमा पाल्पाका प्रतापी राजा मणिमुकुन्द सेनकी छोरी अर्थात राजकुमारीसंग पनि जोडिएको छ । चैते दशैंमा ठूलो मेला लाग्ने यो मन्दिरमा यसपटक भने महोत्सवको नै आयोजना गरिदैछ । एक समय मन्दिरमा लाग्ने मेलाले स्थानीय उत्पादनको पनि भरमार विक्रि हुने भएता पनि अहिले भने यातायातको विकाससंगै कृतिम वस्तुहरुले बजार बनाउन स्थानीय उत्पादनमा भने संकट लागेको छ ।
३. रवीन्द्र अधिकारीको दुःखद निधन पछि कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा सुरु भयो चुनावी चर्चा
कास्की । पर्यटन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीको दुःखद निधनपछि कास्कीको क्षेत्र नम्बर दुई प्रतिनिधि सभा सदस्यविहीन बनेको छ । उहाँको निधनसंगै रिक्त रहेको त्यस क्षेत्रमा चुनावी संकेतहरु पनि देखिन थालेका छन् । बिभिन्न दलका नेताहरु पनि दौडधुपमा लागेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा यो स्थान रबीन्द्रको सम्मानका लागि पनि गुमाउन चाहदैन तर काँग्रेसले पनि यसपटक विशेष तयारी थालेको छ । कस्तो तयारी हुँदैछ त कास्की २ मा पोखरा स्थित टिभी जर्नलिष्ट उत्तम पौडेलले नेपाली काँगे्रेसका नेता कृष्ण कार्कीसंग गरेको कुराकानी मिशन गण्डकीको बाँकी अंशमा ।